ओलीले पार्टी फूटाऔँ भन्दा प्रचण्डलाई 'ज्वरो’ !
घाटगाउँ डटकम सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००
काठमाडौं । पछिल्लो दुई दिन यता सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षले नेपालकै राजनीतिक तरंगित बनेको छ । पछिल्ला ६ महिनायताको निरन्तर भेटघाटलाई प्रचण्डले शनिबार अनौठो प्रस्ताव सामना गरेसँगै तत्कालका लागि सहमतिको सम्भावना टरेको छ ।
एक समय मुश्किलले आफ््नो पार्टीले २० सिट मात्रै जित्ने भएपछि प्रचण्डले हठात ओलीसँग एकताको लगनगाँठो कसेका थिए । चुनाव र सत्ताका लागि जस्तोसूकै सम्झौता गर्न तयार हुने प्रचण्डका लागि अब ठूलो चुनौती अगाडी देखिएको छ ।
खासगरी तत्कालिन एमालेसँग एकता गरेर सम्मानजनक सिट जितेका प्रचण्डले अहिले त्यसैलाई बार्गेनिङ टूल बनाईरहेका छन् । कम्युनिष्टका नाममा परिवर्तनका थुप्रै पहाड चढेपनि त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न भने प्रचण्ड मात्रै होइन, ओली पनि नराम्रोसँग चुकिसकेका छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्दा आगामी चुनावमा नेकपा सोत्तर हुने चिन्ता पनि उत्तिकै थपिदो छ । त्यसमाथि पार्टीभित्र निरन्तर किचलो हुँदा कार्यकर्तासमेत सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । केही कार्यकर्ता नेकपा छाडेर कांग्रेसतिर लागिसकेका छन् ।
गाउँघरमा पनि नेकपाको जग कमजोर बनिसकेको छ । चुनाव जितेर घरदैलोको सरकार चलाएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि स्वयंम पनि अहिले आफ्नै दुनो सोझ्याउनमा लागेका छन् । यसले गर्दा उनीहरुलाई भोलिका दिनमा झन ठूलो संकट आउने खतरा छ ।
कम्तीमा अझै डेढ बर्ष सरकार चलाउने सुविधा पाएको नेकपा आन्तरिक संघर्ष र किचलोका कारण ठूलो भूमरीमा परेको छ । एकातिर महामारी फैलिरदा अर्को तिर पार्टीभित्रै महामारी बढेको छ । नेता कार्यकर्ता अन्यौलमा मात्रै होइन, पार्टीमै भविष्य खोज्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
राम्रोलाई भन्दा हाम्रा र चाकडी गर्नेलाई नेता मान्ने शैलीले उत्पन्न विवाद समाधानका लागि ओली प्रचण्ड असफल भएपछि कार्यकर्तामा ठूलो निराशा छाएको छ ।
धेरैलाई अवगत छ, २०६४ सालको चुनावमा तत्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले तत्कालिन एमाले र कांग्रेसलाई धेरै ठाउँमा पछारेको थियो । तर त्यो ५ बर्ष पनि टिकेन । २०७० सालको चुनावमा नेकपाले त्यो बहुमत स्वात्तै घटायो ।
कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि नेकपा कमजोर अवस्थामा पुग्यो । यसका साथै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि फैलिएपछि वरिष्ठ नेताहरुले साथ छाडे । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरुले साथ छाडेपछि प्रचण्ड एक्लिएका छन् ।
प्रचण्ड एक्लिदा माओवादी पनि लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । ७० सालदेखि ओरालो लागेको माओवादी ७४ सालमा खत्तमै हुने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालिन एमालेसँग एकता भएको थियो । खासगरी चुनावमा आफ्नो पोल्टा भर्ने उद्धेश्यले भएको एकता अहिले ओली प्रचण्डलाई भारी परेको छ ।
कम्युनिष्ट नामको एकता भएपनि नेताहरुबीच पद र पावरको किचलो छ । ठूलो लडाई छ । दिनदिनै सञ्चारमाध्यममा उनीहरुबीचको लडाईको समाचार बनिरहेको छ । यसले कार्यकर्तामा नराम्रो सन्देश जारी भएको छ ।
अब ओलीले औपचारिक रुपमै सल्लाह गरेरै पार्टी फुटाऔँ भनेपछि प्रचण्ड तनावमा देखिएका छन् । यसअघि पनि ओलीले पार्टी फुटाउँदा सबैभन्दा ठूलो ज्वरो प्रचण्डलाई आएको थियो । अहिले पनि प्रचण्डको तापक्रम बढेको छ ।
तर समाधान के भन्ने खुलिसकेको छैन् । यसले गर्दा पनि अबका दिनमा प्रचण्डलाई गाह्रो छ । यदि नेकपा फुटाएर पूर्व माओवादी गठन गर्दा प्रचण्डसँग ठूलो सांसदको सिट हुने छैन् । ६० भाग तत्कालिन एमालेको र ४० भाग तत्कालिन माओवादीको हुने गरी विभाजन हुँदा प्रचण्ड झन कमजोर हुन सक्छन् ।
उनले बढीमा बढी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपनि अरुकै हातमा रिमोट हुन्छ । सोही कारण उनी आफूले चाहेजसरी सरकार चलाउन सक्ने छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा ओलीले पटक पटक पार्टी फुटाऔँ भन्दा प्रचण्डलाई यो प्रस्ताव भारी मात्रै होइन, चुनाव नजिकै आउँदै गरेका बेला उनको राजनीतिक करियर एउटा सानो पूर्व माओवादीको गुट चलाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा अल्झिन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव सोमबार, कात्तिक १७, २०७७, ०९:१०:००